Mfantse kasa mbirenyi bi nom-H3nara nkonkonko
Sun, 14 Jul 2013 Source: Sakyi, Kwesi Atta
Enuanom, midzi kan dze ndaase k3senara ma hom wo nkuranhy3 k3se a hom dze hy33 me ber a mekyer33w nwoma kumabaabi b3y3 bosom kor a woab3sen ko no. Akenkanfo a hom wo Ghanaweb kyer33 odo soronko k3se bi wo h3n Akan kasa a, oy3 Mfantse anaa d3 Fantse kasa, dza a binom taa fr3 no Fante no. Y3taa ka d3 Mfantsefo anaa Fantsefo. Binom taa ka d3 woroko Mfantse, kyer3 d3 woroko Mfantse nkwaado anaa Mfantseman mu. Hmmm! Nhw3. Fantse kasa gu ahorow papa bi. Hon a wowo Gomua, Assin, Oguaa, Anomabo, Edwumako, Nkusukrum, Edina, Takoradi, Ahanta, Apaa, Abura Dunkwa na dza a okeka ho no nyinara wo nsonsonee kwan a wofa do ka hon Fantse. Ana iyi nny3 enyingye bi a? Okyer3 d3 Mfantsefo gu ahorow pie gyan a hon mfarbamfarba kyer3 d3 wofi pow kor mu pueii. H3n Mfantse kasa wo kasambirenyi pii, dza a Ngyiresi-Aborofo fr3 no wo hon kasaa mu d3 Figures of Speech anaa Idioms no. Binom so y3 Litotes anaa d3 Euphemism.
Daano dza a mekyer33w no, obi kae ma adwen wo Sofo Gaddiel Acquaah no mbodzenbo pii a oboe wo h3n Fantse kasa ho. Obiso kyer33 me J A Annobil a nna nky3 oy3 Finimfin mantow mu osuafo wo Busia aban mu no no nkokohwease na amandzehu piinara Nd3 mep3 d3 mekaakaa hom adwen wo Mfantse kasa mbirenyi bi ho wo ha. Me wo Lusaka, Zambia, beebi mbr3 maatsena mfe porpor eduonu ebien. Metsenaa Alataman mu so mfe dubiako. Iyinom nyinara ekyir no, meda ho wo enyigye k3se mapa noara wo h3n kasaa ho, osiand3 mennk3p3 d3 miyi no tokyen. Adabraka. S3bio, mpanyimfo bu b3 bi d3, s3 efir hwan a, oko ne ekyir. Kotow so nnwo anoma. Gyangyanbiara s3 ep3 d3 edwendwen mfantse kasa mbirenyi ho a, edze b3tsentsen wo adwen mu a, ibi so nye iyinom. Onuapa, y3 krado na fa bi nantsew.
1.	Woato akataasia f33f3w no mbondaa ma woedzi no mpatakita.
2.	Kofi Bentum y3 abodonaba a odzi ne yamu papa bi.
3.	Okunyin Kwegyir Aggrey twaa sa mp3n pii ma ne dzin tahyee wo h3n ebibirman yi mu.
4.	Oh33n ne nsa kutu ab3n
5.	Esi Kaadze ne ano y3 tor papa bi. Woesi nkitsi d3 onnk3ma no ano ada.
6.	Kwa Ayaw orebo mboboo.
7.	Dan fofor no a woesi no, edwinfo bi dzii ho akye.
8.	Papa Kwame Mpinii nnyim as3m no ho hwee. Ne tsir mu fitaa.
9.	Maame Ama Sikay3na ne yamu y3 nwen papa bi.
10.	Kwame Amissah nntum mmfa n’as3m nsie.Odze na as3m akema saabanana.
11.	Kofi Gyan tsee anwawas3m no, no nton himaa
12.	Kojo Nt3hwa yii ne yamu mframa ma omaa edidzifo a wowo afahy3 no ase no hon se fimii, ma binom hy33 ase fefee honho potoo.
13.	Kobena Soja fr33 me d3 oriyi ne nsa ntsi memb3ka no ho.
14.	Maame Esi Tekyiwa andodow as3m no ho. Osee no ewur.
15.	Kofi Saaba rugu nsu wo dan no ekyir
16.	Papa Kofi Tekyi ne nsa y3 dzen papa bi. Oy3 okyekyerkyenyi.
17.	Esi Odanyin ne nsamu gow papa bi.
18.	Kwame Afedzi dze no nua no b3y33 ne abadziekyir wo ne edwuma k3se no mu. Iyi kyer3 h3n pefee d3 mogya y3 nyan.
19.	Adwowa Eduwah entsi ho annkyer3 me d3 oroko amanadze anaa aboraekyir.
20.	Wofa Kweenu rebo no mu adze wo mpoano, osiand3 etsib3n abo no.
21.	Kofi Kwaam nye akataasia f33f3w a wofr3 no Ekua Embirba rugu dawu wo paado ho ma adagyer nnyi mu koraa.
22.	Papa Kofi Ntsiful tuu mpasar dze tsentsenee no mpow mu.
23.	Nana Ankobea ko ekura.
24.	Opanyin Kojo Daadze y3 obi a hwee nyi ne nsamu. Nna nky3 oy3 obirimpon. Nd3 woay3 okohweaban a, ohia neminemi eguraa no fi sor sian famu.
25.	Aban abo ahoho binom anan adze itur, ma woetwa hon esu neminemi.
26.	Kwame Arkorful ko egyanando wo mpoano, osiand3 ne yamu etuei anaa oruhuei.
27.	Ebusuapanyin no boo aberantse no kaw fr3dzedze d3 woetsia hon poma ho. Iyi nyinara ekyir no, woboo no koko so.
28.	Asormba no egu hon ano sa dze retwe3n Yesu Amandzehu da no.
29.	Okohweaban na obirimpon dzi esi a, otaa d3 okokweaban dzi nkogu.
30.	Ama Otuwa sii as3m no tadua maa Skuulfo nk3tesiamba na mbanyinmbasiaba no
31.	Maame Amba Arkofowa d3 oridzi mbuada.
32.	Nd3 mbre yi, mbofra piinara agye nsamu ma wohom hon do a, onhom.
33.	Kweku Essiful ne enyiwa atra no nton ma omfa mpayinfo biara nny3 tetaara mpo.
34.	Kaar akwanhyia y3 mbusu k3senara. Munsusu d3m mma obiara. Ma ano da sumina do.
35.	Akataasia f33f3w no amen otwea ne enyiwa ma omf3r hwee. Oton noho gye dw33t33 pii. Eso, no ho nnka ban. Ne nsa wowar papa bi.
36.	Wudzinyi no kor abanmu no, wobuu no fo dze no too efiadze d3 onye aban nko uhyew. Wotoo no koober fanfa.
37.	Nkataasia no risi empire wo t3t3r no mu ho.
38.	Ber a oman sikas3m y33 pitsi basaa no, nna nkontaa ato Bentum a, aka nkongyaa ara a owod3 woyi wo sika korabea ho.
39.	Kofi Simpa koree New York no, ohun ndz3mba ak3se pii ma oton ne enyiwa papa bi. Bobor bor no wo ndz3mba wanwa asorotow pii a ohunii no. Binom y3 tseaseanam afofor f33f3w bi, namdaadzefo pii a woahyehy3 hon ho, na wusiwh3n akakadum ak3se bi a wowo New York Harbour.
40.	Kwame Esoun, s3bio, oy3 apakyer ntsi, onantsew a, oto ne nan benkum do.
41.	Aber a hianyi no dzii bem wo manso a onye sikanyi no rotwe wo asaase ho no, odzii ehurusi ma awasa guraa no, osiand3 na ne enyi nda d3 asendziibea ho no, mbra y3 edwuma. Ne d3m ntsi, wodze obirimpon no kotoo efiadze wo adaduafo paado mfe du.
42.	Kow Mintah kasa a, abo no hwen mu kakra.
43.	Nam ako atwee wo h3n esutsen, owora, mbakambaka, nsutae na epo mu. Iyi ntsi, aban esisiw kwan bon pii a afarfo fa do yi nam.
44.	Ndwom d33d3w no maa bohw3adzefo no yii hon anan adze papa bi.
45.	Amanboefo na epoobofo bi awe ataa do d3 wonnk3ma gyegyegyigye, etsim na aka me, wentwiwentwi na mansotwe mbo adze wo h3n kurow mu ha. Aso, woyinom y3 nyimpa a? K3tseanky3 itur atow wo h3n man mu ha ma woay3 pitsi basaa. Aso kwesienyimpi, akohwi, k3t3asehy3, ndabraba na ns3kuw bon pii yi, odze h3n besi yie dze? Hom ma y3nfa odo, kory3 na p33p3ry3 ny3 h3n fapem mbu h3n Ghana adehye man yi na omb3y3 okrabohw3. Bea a prompromy3 na asomdwee agye ntaa. Mpanyinfo d3, nyim owu a, hw3 nda. Nyame Twerdeampon Okokoroko no b3pa abonfo no hon tsir do pata ma hon emumuy3 no b3da edzi pefee wo ewiaber ketekete, ma honho ato potoo. Wod3, Esuantsefo nnk3tsena ase ma Oseikrom anaa kwae ndan mfofo. Me nuanom, mber rey3 aso. Migyaa hom si ha. Hom mfa asomdwee ntsena. Nyame nto hom nkwa mu, onhyira hom nsano dwumadzi pii, na onkora hom na hom mba, na hom adofo nyinara. Adze b3kye no, na Mfantseman taa ho. Mema hom mbo na y3 na akenkan. Mfantsefo hom mfr3 yie oo, yie mbra. Nhyira a a a o o o! Yehyiahyia o o o! S3 hom rotow aba a, oy3 a wonkae me.